Nzọụkwụ atọ iji bido Mgbasa Ozi Ahịa Azụmaahịa | Martech Zone
Ahịa vidiyo nọ n'ọrụ zuru oke ma ndị ahịa na-ebupụta ikpo okwu ga-enweta ụgwọ ọrụ. Site na ogo na Youtube na Google ka ịchọta atụmanya gị ezubere iche site na mgbasa ozi vidio Facebook, ọdịnaya vidiyo na-arị elu n'elu akwụkwọ akụkọ ngwa ngwa karịa marshmallow na koko.
Yabụ kedu ka isi leverage a ma ama ma dịkwa mgbagwoju anya?
Kedu ihe mbụ ị na-eme iji mepụta ọdịnaya vidiyo nke na-emetụta ndị na-ege gị ntị?
At Vidiyo, anyị na-na-na-amị na ahịa video maka oru buu igba n'ulo, ulo oru, na ụdị ebe 2011. M na ya onwe-arụ ọrụ na ndụ iyi na video mkpọsa maka n'elu azụmahịa nchịkwa na a ole na ole nnukwu aha na-elekọta mmadụ media ahịa.
Anyị maara ihe na-arụ ọrụ, anyị nwere metrik iji gosipụta ya.
Henry Ford gbanwere ụlọ ọrụ mgbe ọ webatara usoro mgbakọ maka mmepụta ụgbọala. Nke ahụ bụ otu ụzọ anyị si ewere vidiyo: ebe usoro nke ọ bụla na-eme ka ị bịarukwuo ngwaahịa vidiyo na-aga nke ọma. Nzọụkwụ mbụ na usoro ahụ bụ mmepe ọdịnaya.
Malite na Usoro Mmemme
Ọbụna tupu ịzụta igwefoto dị oke ọnụ na mkpịsị aka selfie, ndị na-ere ahịa ga-ebu ụzọ wuo usoro (aha na isiokwu) nke a ga-ahazi mkpọsa vidiyo mbụ gị. Anyị na-akpọ nke a mmemme gị.
Anyị na-eji usoro atọ iji zụlite usoro mmemme nke ga-emezu ebumnuche atọ dị mkpa maka gị:
Ọnọdụ vidiyo gị Peeji otu nke nsonaazụ ọchụchọ.
Mepụta gị echiche-dị ka ihe olu ike.
Drivegbọ okporo ụzọ gị ọdịda peeji ma ọ bụ akakabarede omume.
Ọ bụ ezie na vidiyo ọ bụla kwesịrị inwe ebumnuche bụ isi, P3 Content Strategy agaghị enyere gị aka ịmepụta vidiyo vidiyo nke ga-adọta onye na-ekiri gị ihe mbụ mana ịgbaso usoro a ga-enyere gị aka ịhazi ọdịnaya nke vidiyo gị ka ị na-eduga gị ndị na-ekiri iji mee ihe kwesịrị ekwesị.
P3 Ọdịnaya Ọdịnaya
Sere ọdịnaya (Hygiene): Nke a bụ ọdịnaya na-adọta onye na-ele gị anya. Vidio ndị a kwesịrị ịza ajụjụ ndị na-ege gị ntị na-ajụ kwa ụbọchị. Vidio ndị a nwekwara ike ịkọwa okwu ma ọ bụ nchepụta. N'ikwu okwu n'ozuzu, nke a bụ ọdịnaya gị na-adịgide adịgide.
Push ọdịnaya (Hub): Ndị a bụ vidiyo ndị na-elekwasị anya na akara gị na njirimara gị. N'ụzọ dị otú a, ọwa gị na-arụ ọrụ dịka ọwa ebe ị na-ekpebi ihe onye na-ekiri ya ga-ahụ ma ọ bụ nụ. Yabụ, ị na-ejikwa usoro ihe omume ahụ, ọwa gị na-aghọkwa "oghere" maka ọdịnaya metụtara ụlọ ọrụ gị.
Pow ọdịnaya (dike): Ndị a bụ vidiyo gị ka ukwuu. Ha kwesiri imeputa obere oge ma rụọ ọrụ nke ọma mgbe ejikọtara ha na mmemme ma ọ bụ Ememe ezumike nke ụlọ ọrụ gị na-eme. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ị nwere ọwa maka ,mụ nwanyị, imepụta vidiyo buru ibu maka ụbọchị ndị nne nwere ike ịbara gị uru. Ọ bụrụ na ị mepụtara vidiyo maka ndị na-eme egwuregwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ egwuregwu, Super Bowl nwere ike ịbụ oge iji mepụta vidiyo kacha elu.
Banye maka Owen's Youtube Ọzụzụ Taa!
Tags: vidiyoyoutubeahia ahia youtubeyoutube ahịa mkpọsa